Faroole” Kulankii ka dhacay Garowe waxa uu ahaa Qarsoodi” | Baydhabo Online
Faroole” Kulankii ka dhacay Garowe waxa uu ahaa Qarsoodi”
Hoggaankii Hore maamulka Puntland Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Maxamuud Faroole oo la hadlay Warbaahinta ayaa ka hadlay kulan xasaasi ah oo shalay dhexmaray xubnaha Labada Aqal ee degaanada maamulka Puntland u matali doona dowladda Soomaaliya , Ra’iisulwasaaraha dalka iyo sidoo kale Madaxweynaha maamulka Puntland.
Cabdiraxmaan Faroole ayaa sheegaya in kulankaasi looga hadlay arimo u gaar ah Puntland ,islamarkaana aan saxaafada loo ogoleyn in ay ogaadaan.
Wararka qaar ayaa sheegay in Musharaxiinta kasoo jeeda degaanada Puntland oo ka mid yahay Cabdiraxmaan faroole in ay ku heshiiyeen in ay mideeyaan codadkood , islamarkaana ay taageeraayaan Ra’iisulwasaaraha Soomaaliya.
Madaxweynihii Hore Puntland ayaa beeniyay in uu ka taanasulay Musharaxnimadiisa, waxaana uu sheegay in uu yahay musharax u taagan Qabashada xilka Madaxweynaha Soomaaliya ,islamarkaana aysan jirin cid uu uga tanaasulay musharaxnimadiisa.
Musharaxiinta kasoo jeedda degaanada maamulka Puntland oo ka mid yahay Ra’iisulwasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid ayaa maalmihii ugu dambeeyay kulamo looga hadlaayo sidii midkood uu u noqon lahaa hoggaanka dalka waxa ay ku yeelanayeen Magaalada Garowe ee Caasimada Puntland.